अभिनेता राजेश हमाल चलचित्र ‘सत्यम्’मा - HarekKhabar.com
अभिनेता राजेश हमाल चलचित्र ‘सत्यम्’मा
चार वर्षदेखि चलचित्र अभिनयबाट टाढा रहेका अभिनेता राजेश हमालले नयाँ चलचित्र साइन गरेका छन् । उनले यसै हप्ता चलचित्र ‘सत्यम्’ साइन गरेका हुन् । निर्माण टिमसँग ८ महिना लामो छलफलपछि उनी यो चलचित्र गर्न तयार भएका हुन् । ‘रोमियो’ फेम्ड निर्देशक शंकर कार्कीले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्रमा हमालको भूमिका शक्तिशाली रहेको जानकारी प्राप्त छ ।
चलचित्रमा अनुप विक्रम शाही पनि अनुबन्ध भएका छन् । चलचित्रमा उनी भिलेनको रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् । यसअघि चलचित्र ‘सौर्य’ मा एकसाथ काम गरेका हमाल र शाहीको ‘सत्यम्’ मा भिडन्त हेर्न पाइनेछ । चलचित्रका लागि अहिले दुवैले आफ्नो लुक्स परिवर्तनमा मेहनत गरिरहेका छन् । चलचित्रले नेपाली समाजभित्रको एक नायकको कथा भन्नेछ ।
चलचित्रका लागि अहिलेका एक चल्तीका नायक-नायिका पनि लिने निर्माण टिमको तयारी छ । बाँकी कलाकार भने अडिसनबाट छानिनेछ । यो चलचित्रको लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जालबाट निर्माण घोषणा गरिएको थियो । यसबेलादेखि निर्माण टिम राजेश हमालसँग छलफलमा थियो । उनले स्क्रिप्ट र आफ्नो भूमिका चित्त बुझेपछि ४ वर्षपछि चलचित्रमा फर्किने निर्णय गरेका हुन् ।
अन्जुको बिहे थिर सङ्ग
स्वस्तिमा खड्का दक्षिण भारतीय सिनेमा ‘थिरिमाली’मा ?
सन्धर्भ-प्रेम दिवस: केही प्रेम कथनहरु
सन्धर्भ-प्रेम दिवस:ल है! , लह-लहै नहोस प्रेम
सन्धर्भ बिश्व रेडियो दिवसः एक रेडियोकर्मीको रेडियो स्मरण
सुवासको ‘सपनाका अवयव’बारे अन्तर्क्रिया